Airbus ACJ320neo Aerospace Private Jet Aircraft ukubuyekeza is Ukuphakamisa wenduduzo ezinyoni kanye flying abagibeli ukuba HORIZONS amasha, ngokuwasebenzisa of ubuchwepheshe eziningi zalezi zinsuku, lezi Jets yenkampani ivulekile ukunikeza amakhasimende ikhono ukuthatha zokuphila zabo zikanokusho noma ikephi lapho uya ngenkathi kuhambeke Riding ku indiza yangasese ibhekwa ngabathile ukuba okunethezeka oyinhloko ekuvakasheni. Nokho, kukhona inzuzo yangempela ugibele kwelinye, kufanele empeleni okukwenza. Nakuba zikhona zonke izinhlobo izindiza esetshenziselwa yangasese jet mabutho, Airbus kubhekwa njengento omunye the best indiza brand ibhizinisi.
Airbus, inkampani wenze igama layo ngoba ezintsha e Aerospace ubuchwepheshe, Uletha out isizukulwane yayo yakamuva izindiza lenzelwa ezinkampani yangasese jet ukusetshenziswa. Kufaka kulesi sizukulwane esisha izindiza kuyinto Airbus ACJ320neo. Lokhu kubuyekeza kuzothatha sihlolisise le imodeli entsha nokuthi limelela ikusasa Jets yangasese.
Airbus ACJ Uhlolojikelele
Airbus ubelokhu esebenza ku esizukulwaneni sabo esilandelayo Jets kusukela 2016. Kulezi izibuyekezo iyathandwa kakhulu Airbus Commercial Jet zabo (ACJ) umugqa. ACJ yabo umugqa zithandwa kakhulu labo ukuthenga Jets zabo kanye mabutho ukuthi baphathe jet yangasese services eziqashisayo. Ngenkathi ACJ ikufakazele ukuthi iyimpumelelo kakhulu nge inhlanganisela yayo izici, ukusebenza, nekghono, Airbus namanje uyazi ukuthi kusekuningi usengathuthuka. Lokhu sekuholele ekutheni ukukhululwa kwe-ACJneo, isizukulwane esilandelayo Airbus Jets commercial, ngoJanuwari 2016.
I-Airbus ACJ320neo iwumkhiqizo Uhlelo Airbus sika neo. empeleni Neo kuyinto emelela ukuthi imele "inketho injini entsha". Airbus athuthukile izinketho ezintsha injini for izindiza zazo commercial ezifana A320. Lezi izinjini ezintsha unemigomo ukusebenza eziphakeme: a 15 ukuze 20 amaphesenti ngcono uphethiloli ukusebenza kahle, umsindo encishisiwe, nentuthu oyikhiphayo aphansi. Nge lezi zithembiso, Ama-oda for the "imikhakha engaqondakali neo" ayemakhulu kakhulu-5200 amayunithi, ukuba ngqo. Ukuze sibonise indlela lesi ukuqonde, Airbus sekudayiswe emhlabeni 7500 izindiza ewumngcingo-umzimba kusukela 1988. Sikhishwe ubukhulu yokuthengisa, neo limelela ikusasa Airbus. Kufanele uphile ngokuvumelana naloko hype njengoba kungcono manje esiyinhloko imali umenzi inkampani.
Ngo ukuthuthukiswa kwe-ACJneo, Airbus bafuna izindlela ukwenza izindiza zazo kahle kunanini ngaphambili. Okuxhunyanwa imethrikhi inkampani esetshenziswa iyona "ngayinye umgibeli esihlalweni imayela" izindleko. Kuthathwa ngokuthi ngezinga elithile izindleko-ukusebenza wokusebenzisa indiza. I aphansi lokhu izindleko, le indlela esebenza kahle indiza. Ukuze uthole aphansi umgibeli ngamunye esihlalweni imayela izindleko, Airbus wenza zonke izinhlobo nokuthuthukiswa ubunjiniyela we ACJneo. Nakuba i-Airbus esebeké Ukugcizelelwa kahle, Benze njalo-ke ngaphandle umhlatshelo induduzo, ukusebenza, kanye nezinye izici ezifiselekayo ukuze bathole Jets. Lezi izindawo ezidinga ukwenziwa ngcono uzobe ayifake focus kamuva.
Sikhishwe isikhundla salo ebalulekile Airbus umkhiqizo umugqa, the ACJ320neo has ukuze uphile ngokuvumelana naloko hype nokuningi. Into enhle ukuthi uma uthatha okuseduzane, lokhu indiza is everything it wawusakhangiswa ... bese abanye ngaphezulu.
Umthamo jikelele endizeni zingahlukaniswa zibe amamethrikhi amaningi. Lokhu nesilinganiso kuncike ngokuyisisekelo ekucushweni sangaphakathi kundiza ngabanye. Imithwalo umthamo kungenziwa ihlukaniswe 2 amapharamitha: yangaphakathi wemithwalo umthamo, okuyinto inani wemithwalo ukuthi kungenziwa stowed ngaphakathi ingcindezi / lokushisa elawulwa gumbi indiza, kanye yangaphandle wemithwalo umthamo, okuyinto inani wemithwalo ukuthi lungatholakala ngaphandle izindiza.
Yize Airbus ACJ320neo ayinakho zangaphandle wemithwalo umthamo, kwenza i ngayo okukhulu kwangaphakathi wemithwalo umthamo wayo. I yangaphakathi wemithwalo umthamo we ACJ320neo kukalwa at inani eliphakeme lezakhamuzi zasemadolobheni 976 cubic amalitha, okwenza kube kalula zeklasi yayo kulesi sigaba. I jikelele zihlalo umthamo lokhu indiza incike ngokuphelele uhlobo ukucupha Ingaphakathi umnikazi efuna, kodwa isitokwe ukumisa yayo anganikeza ekahle yokuhlala ngoba 19 abantu, okuyinto kwanela ngezinhloso eziningi.
Ukulinganisa Inkokhelo yendiza, une ukusebenzisa izilinganiso eziningi ezihlobene isisindo yendiza, inombolo yezinto ke okuthwala, kanye nokunye okufana nalokho. Isisindo tekusebenta endizeni kuyinto isisindo izindiza kuhlanganise nezisebenzi tekusebenta, uketshezi oludingekayo ezifana fuel, futhi zonke izinto opharetha adingekayo indiza. I ukusuka esiphezulu kanye kokwehla isisindo kuchazwa ngokuthi isisindo esiphezulu ingqikithi indiza phama ngokugcwele lapho ukusuka kanye kokwehla engenziwa ngokuphepha. isisindo Iwusizo kuchazwa njengoba inani isisindo ukuthi indiza okuthwala emva isisindo umshayeli, iqembu, nophethiloli isusiwe.
Ngamagama lezi zici Inkokhelo, the enhancements on the Airbus ACJ320neo also work very well in its favor. Maximum landing weight is measured at 148,592 amakhilogremu, futhi esiphezulu ukusuka isisindo kukalwa at 174,165 amakhilogremu, futhi ingaphezulu kakhulu izindiza ekilasini yayo. Isisindo tekusebenta lokhu indiza kukalwa at 104,453 amakhilogremu. Okokugcina, the Inkokhelo ewusizo lokhu indiza kukalwa at 8,900 amakhilogremu, okungenzeka uzwakale, kodwa siphezulu kunamanye mncintiswano. Ngokuya Inkokhelo izinombolo, the ACJ320neo kukhanya.
Speed ​​luncike anhlobonhlobo eziguquguqukayo. Lokhu value luncike izici bangaphakathi njengoMnyango amandla injini nekghono sokunciphisa umoya lapho zindiza, ngenkathi izici ngaphandle ezifana namandla emoyeni ukujiya kanye nomoya / Tailwind nazo zinendima ethile. Ukuze Airbus ACJ320neo, izibalo ukhombe endizeni ukuthi ingaphezu uyakwazi indiza okusheshayo. esiphezulu cruise Isivinini salo kukalwa at 527 mph, isilinganiso cruise ijubane layo uma igijima kukalwa at 527 mph, futhi eside ijubane layo uma igijima ibanga cruise kukalwa at 514 mph. Zonke lezi zibalo ukumela ngcono nesizotha kuqhathaniswa izindiza ezifanayo ekilasini yayo.
Ububanzi indiza kuyinto nesilinganiso kude kangakanani indiza angahamba usebenzisa ithangi egcwele amafutha. Njengoba sazi ukuthi esisodwa okungafanele Airbus sigxile phakathi ukuthuthukiswa kohlelo Neo yokuthi kahle, you can expect this plane to shine in that department or at least show significant improvements relative to its competition. Apparently during testing, zonke lezi zinguquko wasebenza, okuholela ku ezahlukene izibalo ezokwenza kalula nishaye away mncintiswano.
I kulinganiswa ububanzi esiphezulu Airbus ACJ320neo kukalwa at 7,099 amamayela, kuyilapho izihlalo uhla egcwele kukalwa at 7,021 amamayela. ububanzi Maximum lichazwa ngokuthi furthest endizeni kungaba bahlasele cruise isivinini at kokuwa elilungile, ngenkathi izihlalo uhla egcwele lichazwa ngokuthi ibanga esiphezulu endizeni kungaba bahlasele Inkokhelo esiphezulu. Izilinganiso abafanele etholakala kukhona siphezulu kuqhathaniswa Jets efanayo, yekwetfula nesithembiso sokuthi Jets Neo izoba okungenani 20% kangcono uphethiloli ukuqeqesheka kuqhathaniswa namanye zabo.
Ukuphakama enye imethrikhi ukusebenza evame ukusetshenziswa ukucacisa ukusebenza amakhono endizeni sika. Ayanda engamamitha endizeni angahamba, ngcono amandla akhe. Ngesikhathi esifanayo, ukukwazi ukuhamba endaweni engamamitha ephakeme liveta ukusebenza kahle izinzuzo. Nge ohlabayo emoyeni abakhona emachibini ephakeme, emoyeni ukumelana bese uhudula kuba encishisiwe, umphumela ephakeme ngesivinini travel futhi kangcono uphethiloli ukusebenza kahle. Kwenzeka inqaba, the ACJ320neo has isevisi ophahleni 41,000 izinyawo, okuyinto sibekwa yini ephansi kuqhathaniswa Jets efanayo ukuthi ibe nesevisi engamamitha kuze kufinyelele 45,000 izinyawo.
Runway obuphelele iqoqo izilinganiso ukuthi ukunquma ibanga adingekayo endizeni zikhumule ngejubane futhi wenze ngci ku lokubikezela. Ibanga lokufikela le ACJ320neo kukalwa at 4,665 izinyawo, okusho ukuthi ubude edingekayo ensimini kwakudingeka nomhlaba izindiza at isisindo isilinganiso. I olinganiselayo ensimini obuphelele kukalwa at 5,820 izinyawo, okuyinto ibanga ayidingekile ukuthumela endizeni ngesivinini ukusuka bese wenze ngci. Nakuba zikhona izici eziningi ezingathinta lezi zibalo evulekile obuphelele, kungashiwo ngokuphepha wathi ukuthi ACJ320neo idinga evulekile obuphelele zikhumule nezwe ngokuphepha.
I-Airbus ACJ320neo has a Umkhumbi izici ezintsha, sibambe tech ngcono lutfutfukiswa ngekuhamba neminyaka izindiza isipiliyoni. I ACJ320neo, kanye nezinye commercial jet onobuhle kufakwe ohlelweni neo, iphuma kanye impukane ngu zokulawula wire, Avionics eziphambili, nezici ububanzi-ekufukuleni. Iphinde iza gumbi 90-foot ukuthi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana izidingo nezinto ezithandwa womnikazi. Nakuba okuzenzakalelayo esihlalweni-19 ukumisa kokubili ithokomele and zikanokusho, Airbus has inqwaba ongakhetha azosiza ngokwezifiso Jets ngalokho okuthandwa yomnikazi siqu.
I-Airbus ACJ320neo Aviation, kuyilapho kakhulu ekubeni yi-jet, ephelele, imele ikusasa ndiza commercial. Nge ngcono yayo enkulu futhi uchwepheshe banamuhla design, ke eletha ukusebenza kahle izibalo elenza ivelele nazo zonke ezinye. Kuyinto ngokushesha, more fuel efficient, and more capable of carrying heavier loads than its contemporaries. These improvements totally make sense not just for private jet owners, but also for those interested in rentals. Same luxury, better performance, and lower costs: yini enye engase yenziwe renter ufuna kwi yangasese jet eziqashisayo? Airbus ikwenzile futhi.
Airbus acj320neo Ihubo Ingaphakathi